Bangiga Ganacsiga Ethiopia oo ogolaaday in Jigjiga District. - Ogaden24 | Ogaden24
Bangiga Ganacsiga Ethiopia oo ogolaaday in Jigjiga District.
Oct 16, 2020 - Aragtiyood
Inkastoo deegaanka soomaalidu yahay kilil buuxa oo ka tirsan federaalka Etiyoobiya, baaxad ahaan ah kan labaad ee ugu weyn wadanka, dad ahaan ah kan saddexaad haddana dhamaan hay’adaha federalka ee ka hawlgala deegaank sida Ethiopian commercial bank, korontada, isgaaarsiinta ,Ethiopiyaan airline iyo dhaman laamaha kaleba waxaa laga xukumayay Deridawa.
Bankiga ganacsiga Etiyoobiya waa bank ay leedahay dowladda federaalku waxay ku leedahay wadanka 1560 laamood. Waxay leedahay 30 district oo laga xukumo 1560 laamood ee ay ku leeyihiin wadanka. Hal districta xataa ma laha deegaanka Soomaalidu.
Deegaanka Soomaalida waxay ku leedahay 34 laamood. Waxayna maamul ahaan hoos yimaadaan Deridawa, marka laga reebo Raaso iyo Hare Dube oo hoos taga Shashamane iyo Filto oo hoos tagta Hawasa.
Shaqaaluhu 99.5% waxay ka soo jeedaan qowmiyadaha kale mana yaqaanaan af soomaaliga, 34 laamood maamulayaashooda 2 ayaa ka ah Soomaali. Soomaaliduna dhib fara badan oo luqada iyo cunsurinimo ayay ku qabaan.
Dowlad deegaanku Soomaaliduwaxay awood u leedahay in ku qasabto bankiga in shaqaalihiisa iyo maamulayaashiisuba ay noqdaan soomali xataa sharciga ayaa dhigaya in shaqaalaha iyo maamulkuba ay yihiin kuwa fahmaya luqada deegaanka.
Deegaanka Oromada maamulayaasha distriktyada iyo laamaha bankigu 95% waa oromo. Luqada bankiyada dhexdooda looga hadlaa hadda waxay u badan yihiin Oromo.
Commercial bank wuxuu ogolaaday hadda in Jigjiga laga dhigo District ay soo hoos galayaan laamaha soomaalidu. Maxaase dhacay. Waxaa maamule looga soo dhigay shakhsi aan Soomaali ahayn. Haddii aan laga felcelinana maamulaha iyo dhaman waaxyahu waxay noqon dad aan Soomaali ahayn.
Waxaa la joogaa xiligii ay wasarada maaliyada ee deegaanka iyo madaxtooyadu ay gudan lahayeen awoodooda dastuuriga ah ayna la xisaabtami lahaayeen bankiga ganacsiga Etiyoobiya kuna qasbi lahaayen in maamulka iyo shaqaaluhuba noqdaan dad garanaya luqada deegaanka lagaga hadlo dibna u eegaan maamulaha distric hadda la soo magacaabay.
Ditrict wuxuu yeelanayaa waaxda lacagta adag, waaxda dayn bixinta, waaxda cafinta daymaha , waaxda shaqaalaysiinta iyo waxyo kaleba.
FG. Waxaa farxad ah in korontada deegaanka districk laga dhigo jigjiga soomaalina madax looga dhigo welisa kow ma joogto.
Ilaahay awoodeena ha ina tuso, cid kula soo doonanaysaa ma jirta xaqaaga haddii aadan adigu soo dhacsan.
Xigasho: Cabdiraxmaan xaaji warfaa
Rugta ganacsiga DDS